Imikhwa emibi ingakhiwa ukususela ebuntwaneni. Umkhwa womntwana wokugaya kwiintambo zakhe okanye ukuthabatha impumlo yakhe ingapheliyo, ukuba ingamtholi. Indlela yokulahla imikhwa emibi ilula. Indlela efanelekileyo kakhulu yokuncedisa umntwana kwimikhwa emibi kukuba ithathe indawo yazo.
Ukuze umntwana angabi mnye walabo bantu abaqhawula izipikili okanye bathathe iindondo zabo kwiindawo zikawonkewonke, kubalulekile ukuthatha amanyathelo afike ngexesha. Kwaye kuyimfuneko ukuba usebenze ebuntwaneni, ngaphandle kokulinda umntwana ukuba akhule. Enyanisweni, abantwana abaninzi abancinci banamathela ngomnwe baze baphose kwiipumlo. Ngamanye amaxesha kubonakala kukuhle kwaye kumnandi. Kodwa akufanele ukhuthaze ezi zenzo ngenxa yesithombe esithakazelisayo okanye ungayithobeli ingqalelo. Xa uneminyaka yobudala, oku kuza kuba yimikhwa emibi neyingozi, enzima ukuyila.
Ukuziphatha kakubi kuvela njengesiqhelo esiyinhloko kubantwana, njengabantwana balingisa umntu okanye bazame ukulahla ezinye izinto ezinomsindo. Abantwana banokuthi "baqhube" impumlo ngokubanda. Okanye usondeze isithupha, kuba amazinyo angenakunyusa atyhawula iinjongo. Okanye udibanise izipikili, kuba zide kakhulu kwaye zikhathaza abantwana. Abantwana abakhulileyo bayayikopisha imiqondiso kunye nokuziphatha kwabo babini abadala kunye noontanga, abazalwana, odade. Kubandakanya, ukuzuza kunye nemikhwa emibi.
Indlela yokulahla imikhwa emibi ehambelana neempumlo.
Abantwana abancinci baqala ukukhetha iminwe yabo ekhaleni, ngokungaqondi ukuba oku kubi, akusiyo isiko ukwenza, ingakumbi kwindawo kawonkewonke. Ingcamango yokuziphatha kunye nokuziphatha ayimfuneko kubo. Kodwa bayaqaphela ukuba ngamanye amaxesha abantu abadala bakwenza oku (umzekelo, ngexesha lokubanda) uze uzame ukuxelisa. Esinye imbangela sinokuba ngumkhuhlane oqhelekileyo ocaphukisa i-mucosa yomlomo. Indlela yokukrazula le mkhuba ilula. Fumana iibhola ezihle ezimnandi ezikhwankqisayo. Amasheki kufuneka atyelele ingqalelo yintsana, bangela umnqweno wokuba uhamba nawo yonke indawo. Yiba nomonde kwaye uchaze ngokucacileyo indlela yokuwasebenzisa. Kwaye landela ukucoceka komntwana.
Iintsana zivame ukuqala ukunciba ngomunwe emva kokuncothula kwi-pacifier okanye ingono. Bafuna indawo eyaneleyo yesithandwa, kwaye isithupha sinokulungele oku. Kodwa akukwenzi kube lula kumama! Kakade ke, ukutsala iminwe yakho iyancipha umntwana, ngakumbi ngaphambi kokulala. Nangona kunjalo, kunokwenzeka ukuba kuthwale isifo, "thabatha" iimbungu, kunokubakho iingxaki ngamazinyo. Oomama abaninzi bajamelene nale ngxaki. Okokuqala, kufuneka siqinisekise ukuba umntwana akalambile. Mhlawumbi ukhangelele umthombo wokutya. Ukuba kuyimikhwa emibi, kungcono ukuba umntwana alale nonina ixesha elithile. Ufuna ukudala umoya wokhuseleko. Khanyisa ngokukhawuleza ngaphambi kokuba ulale, cula i-lullaby, unike ipeni kwindawo yokudlala yakho. Ngokuqhelekileyo kulo mkhuba abantwana banqabile ngokukhawuleza ngqalelo kubazali.
Indlela yokulahla umkhwa wokubamba izipikili zakho.
Uninzi lwabantwana luqala ukugqithisa izipikili zabo ngaphambi kokuba bafikelele kwiminyaka engama-3. Esinye sezizathu kunokuthi kukuba izipikili zibangela ukucasuka. Kananjalo le mkhwa unokusabela ekuxininiseni, ukuxhalaba nokukhathala. Akulula ukuwususa lo mkhuba. Kwanele ukugcina abantu abadala ukuba baqonde ukuba le ngxaki iyabonakala kubantu abaninzi. Ukungaxhatshazi umntwana ukuba afune izipikili, kufuneka aqale anqunyulwe. Unokuzama ukugcoba iminwe okanye iminwe yezinto ezithile ezinomsoco ongeyantleki okanye ukunambitha. Ngaloo ndlela, ezinye iingcamango (iphunga elimnandi nelinambitha) kwinqanaba elincinci liya kutshabalalisa enye (ukugquma izipikili). Kwaye oku kuya kwenzeka kungakhange kuqaphele umntwana. Nangona kunjalo, qiniseka ukuba isisetshenziswa esisetyenziswayo asiyingozi. Indlela yesibini ifanelekileyo kumantombazana. Akunjalo ngokupheleleyo, kodwa iyasebenza. Intombazana inokupenda izipikili nge-lacquer kwaye ithi le nto yingozi. Kwaye ukuba uqaphele ukuba ukuba uyayifumula ubuncinci isiqwenga, isisu sisaphula. Kule meko, ukwesaba ingozi kufuneka kunqobe umkhuba omubi. Kodwa khumbula ukuba bonke abantombazana abanamahloni ...
Ukukhanyela iinqwelo zokubhukuda okanye zokubhukuda.
Abantwana abaninzi besemncinci behamba emanxwemeni behamba behamba. Kwaye akukho nto ikhethekileyo. Kodwa emva kweminyaka engama-4-5, umama ngomntwana uthenge iinqwelo zokuhamba okanye zokubhukuda. Uninzi lwa bantwana, ulingisa abantu abadala, ubabeke ngaphandle kweengxaki. Nangona kunjalo, kukho abantwana abanqabileyo ngokucacileyo eli nqaku le-wardrobe. Benza amalungiselelo okuhlambalaza, bahlala befotshwa. Ekugqibeleni, bonke abanye bachithwa. Isizathu salo mkhuba kukuba umntwana kwimeko ethile (kwimeko - elunxwemeni) isetyenziswe kwisiqulatho esithile sezenzo, oko kukuthi, ukuhamba. Akayithinteli ukunyakaza kwakhe, uthanda ukuphumla kunye nenkululeko. Ukongezelela, i-swimsuit kunye namathangi okubhukuda ikhubaza isikhumba esincinci somntwana ngokuxhatshazwa, ukunciphisa inkululeko yaso nokudala ukungakhululeki. Nangona kunjalo, kufuneka senze into malunga nale nto. Ukuba sasiphila kwiGrike lasendulo, ingxaki leyo ayiyi kuba khona. Kodwa kufuneka sihambisane nemimiselo yokuziphatha. Zama ukuchazela umntwana ukuba yonke into ecaleni lolwandle kunye nebhodi lokubhukuda ibhuku lokubhukuda nokuzihlamba. Yithenge i-swimsuit enamhlanje, eyonwabileyo, enemibala. Kufuneka ukhumbuze umntwana we-toy ekhanyayo, ofuna ukuziqhayisa kwabanye abantwana. Kananjalo ukhumbuze rhoqo umntwana ukuba uyona mhle kunabo bantu kule mibhobho yokubhukuda (okanye i-suit suit).
I-Technique yokukrazula umkhuba wokubetha okanye ukuhlafuna imilomo yakho.
Lo mkhuba uvame ukubangelwa imeko ephazamisayo kumntwana. Ukuba awuyikuqwalasela le ngxaki, ithabatha ingcambu yobomi. Okokuqala, kufuneka ufumanise isizathu sokuphazamiseka kwengqondo. Okwesibini, unako ukuhlaziya umlomo wakho umntwana kunye ne-cream okanye lotion, mhlawumbi kungathandeki ukunambitha. Xa ubona ukuba umntwana wakho uqala ukuluma umlomo wakhe, umphazamise. Mnike into yokuhlafuna okanye ukuyidla. Into ephambili ukunyamekela nokuqwalaselwa rhoqo.
Ukusebenzisa ukudibanisa iindlela ezahlukeneyo zokulahla imikhwa emibi, unokufumana iziphumo ezilungileyo. Kubalulekile ukukhumbula oku kulandelayo:
- Awukwazi ukuba nomsindo kubantwana bakho;
- Musa ukuhlwaya imikhwa emibi;
- indlela eyona ndlela iphumelelayo yokukhusela umntwana kwimikhwa emibi, oku kukubuyisela kuzo izinto ezincedo;
Ngokutsho kweengcali zengqondo, ukuze umkhwa uthathe iingcambu, ubuncinane iintsuku ezingama-21 zezenzo eziphindaphindiweyo ziyafuneka. Ngoko ke, ukuba uhlala uqaphela umntwana wakho, ungayijonga ingxaki ngexesha kwaye uthathe inyathelo kwangaphambili.
Ngaba kufanelekile ukugxeka umntwana kumabakala amabi?
Indlela yokusebenza kwikomiti yabasetyhini?
Ukukhethwa kwehlobo: i-hairstyle ene-hoop
U-Alexey Panin wenyelisa unina wentombi yakhe, ividiyo
Awukwazi ukuguga emva kwe-30: Iimfihlelo zikaGluck'ozy
Amatshontshi ashushu kunye ne ham, utamatati namaqanda
Ukuvuvukala kwemiphunga: unyango, amayeza